देशकै पहिलो महिला मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्य को हुन् ? बिताएकी थिइन् ११ वर्ष भूमिगत जीवन - टि. एल. एन पोस्ट
Home समाचार देशकै पहिलो महिला मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्य को हुन् ? बिताएकी थिइन् ११...
देशकै पहिलो महिला मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्य को हुन् ? बिताएकी थिइन् ११ वर्ष भूमिगत जीवन
एमाले विभाजन भएकै दिन बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री फेरिएको छ । बुधबार डोरमणि पौडेलले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएलगत्तै एमालेकै नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएकी हुन् । शाक्यलाई प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाईंले बुधबार राति शपथ गराएका छन् ।
६८ वर्षीया अष्टलक्ष्मी शाक्य २०१० सालमा काठमाडौंको नेवार परिवारमा जन्मेकी हुन् । दशैंको अष्‍टमीको दिन जन्मेकाले उनको नाम अष्टलक्ष्मी राखिएको उनी आफैंले बताउने गरेकी छन् । २०२९ सालमा एसएलसी पास गरेकी अष्टलक्ष्मी २०३६ सालमा घर छोडेर पूर्णकालीन राजनीतिमा लागेकी थिइन् ।
भूमिगत राजनीति गर्दा शाक्य २०४५ सालमा इलामका पक्राउ परिन् र पछि अखिल नेपाल महिला संघको अध्यक्ष समेत भइन् । शाक्य निरन्तर रुपमा पार्टीमा सक्रिय महिला नेतृ मध्येमा पर्छिन् । शाक्य २०५६ साल र २०७१ सालमा भएको संविधानसभा चुनावमा सांसदमा निर्वाचित भएकी थिइन् । यसअघि दुईपटक मन्त्री भइसकेकी शाक्य गत २०७४ सालमा भएको प्रदेश सभामा काठमाडौ निर्वाचन क्षेत्र ८ ९ख० बाट निर्वाचित भएकी थिइन् ।
उक्त निर्वाचन लगत्तै मुख्यमन्त्रीमा दावी गरेकी शाक्यलाई त्यसबेला एमालेको भागवण्डा नमिल्दा डोरमणि पौडेल मुख्यमन्त्री बनेपछि उनी प्रदेशसभा सदस्यमा सिमित बनेकी थिइन् । पञ्चायतकालमा झण्डै ११ वर्षसम्म भूमिगत जीवन बिताएकी शाक्यले २०३७ सालमा पार्टीकै नेता अमृतकुमार बोहोरासँग विवाह गरेकी थिइन ।
बोहरा एमालेका स्थायी समिति सदस्य तथा एमाले अनुशासन आयोगका अध्यक्ष समेत हुन् । उनी माधव नेपाल समुहका भनेर चिनिएपनि बुधबार नेपालले गठन गरेको नयाँ पार्टी नेकपा एमाले समाजवादीमा सहभागी छैनन् ।
Previous articleनेपालले दर्ता गरे नेकपा एमाले (समाजवादी), चुनाव चिह्न खुला किताब
Next articleआजदेखि कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थीहरूलाई कोरोनाविरुद्धको खोप, कहाँ कहाँ लगाइदैछ ? हेर्नुहोस्
आगो लगाएर श्रीमतीको हत्या, श्रीमान पक्राउ